फ्रिजमा यस्ता खानेकुरा कहिल्यै नराख्नुहोस् – Khabar PatrikaNp
फ्रिजमा यस्ता खानेकुरा कहिल्यै नराख्नुहोस्
August 10, 2020 234
७. टमाटर सस प्राय सबैलाई स्यान्डबीच, चिप्स लगायत अन्य खाजामा केचअप अर्थात टोम्याटो सस प्रयोग गर्न मनपर्छ । तर यदि तपाईलाई केचअप बजारमा अभाब हुनेजस्ता लाग्छ भने घरमा ल्याउनुहोस तर फ्रिज बाहिर राख्नुहोस । फ्रिजमा आइसले जमेको केचअप पग्लिदा यसमा भएका टमाटर पेस्ट, पानी र भिनेगर सबै छुट्टिन्छ । यी माथि उल्लेखित खानेकुरा फ्रिजमा राख्ना स्वाद, तत्व, आकार लगायत विभिन्न विशेषतामा फरक आउँछ । त्यसैले कुन खानेकुरा फ्रिजमा राख्दा फरक पर्दैन, बुझेर निर्णय गर्नुहोस ।
Prevगायत्री मन्त्रबारे ११ कुरा, किन जप्ने ? पुरा पढ्नुहोस
Nextबिहान बिहान यि काम गरे घरमा सुख समृद्दी मिल्नेछ
प्रधानमन्त्रीले नेताहरुको फोन ट्यापिङ गरिरहेका छन् : वर्षमान पुन
ज्वाइँलाई दाइजोमा ५ लाख र मोटरसाइकल नदिँदा विहे भएको ४ महिना नवित्दै छोरीको ह,त्या !
७ दि’नभि’त्’रमा त’पाइले सो’चेको का’म ब’न्नेछ, ॐ लेखि से’यर ग’रौं !
टमाटरको सहायताले गायब हुन्छ तपाईको अनुहारको अनावश्यक रौँ, जान्नुहोस् यसको जादु …
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33345)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (21781)